Ukuqoqwa Kwezikweletu Kwe-eCommerce Startups: Umhlahlandlela Ocacile | Martech Zone
Ukulahlekelwa okususelwa ekuthengisaneni kuyiqiniso empilweni yamabhizinisi amaningi, ngenxa yokubuyiselwa emuva, izikweletu ezingakhokhiwe, ukubuyiselwa emuva, noma imikhiqizo engabuyiswanga. Ngokungafani namabhizinisi abolekisa okufanele amukele amaphesenti amakhulu okulahleka njengengxenye yemodeli yawo yebhizinisi, ukuqala okuningi kuthatha ukulahleka kokuthengiselana njengenkinga engadingi ukunakwa okuningi. Lokhu kungaholela kuma-spikes ekulahlekelweni ngenxa yokuziphatha kwamakhasimende okungabhekiwe, kanye nokusalela emuva kokulahleka okungancishiswa kakhulu ngezinyathelo ezimbalwa ezilula. Kumhlahlandlela olandelayo sizobuyekeza lokhu kulahleka, kungani kwenzeka, nokuthi yini engenziwa ukunciphisa.
Lo mhlahlandlela uzosiza ikakhulukazi uma ngabe uyimakethe ebhekene nokukhokhiswa kwemali kubathengi nakubathengisi abanesibopho sobuchwepheshe kepha imvamisa abakwazi noma abangakhokhi, insizakalo ekhokhelwa ngemuva (ukukhangisa, i-SaaS, nabanye) engakwazi ukukhokhisa amakhasimende lokho awunayo noma insimbi yokukhokha ephelelwe yisikhathi kufayela, inkampani ye-eCommerce neyokubhalisela esebenza ngokukhokhelwa emuva nezicelo zokubuyiselwa imali noma ukuphathwa kwemali nezinsizakalo zezezimali ezihlangabezana nokubuyiselwa kwe-ACH nezinye izinkokhelo ezingabanjwanga.
Ukulahlekelwa nokuthi Kungani Kwenzeka
Amabhizinisi aphumelelayo anamakhasimende amaningi, futhi amakhasimende amaningi ayaphinda. Ibhizinisi elikhulu lokuthengiselana liheha iningi lamakhasimende athengayo, athola imikhiqizo kanye / noma izinsizakalo futhi ashiye ejabule. Noma kunjalo, yonke imodeli yebhizinisi ikhonjelwe ezingeni elithile lokulahleka. Ngenkathi okuningi kungaba ngamabomu, ucwaningo lukhombisa ukuthi iphesenti elikhulayo alikho.
Amandla ashukumisayo okuthengwa ku-inthanethi aseshintshe ngokuphelele kule minyaka eyishumi edlule. Ukuthenga online manje sekujwayelekile. Noma ngabe insizakalo yokuwasha izingubo noma incwadi entsha, sinamakhadi ethu esikweletu agcinwe futhi ukuthenga ngokuchofoza okukodwa kusethiwe, ngamakhasi okufika enzelwe ukunciphisa ukungqubuzana. Le ndawo yokuthenga ebonakalayo, ehambisana nemithetho elula yokubuyisela emuva, eyenziwe yaba lula kakhulu ngokuthengwa okungqubuzana okuphansi, iholela ekuzisoliseni okwandayo komthengi kanye nomuzwa wokuthi amakhasimende angawala ukukhokha ngoba amabhizinisi azokumukela nje lokho. Ucwaningo lukhombisa ukuthi imali engama-1% yentela nokubuyiselwa emuva kungenxa yalezi zizathu, hhayi ngenxa yokukhwabanisa noma ukwebiwa kwemininingwane. Kulula, izizwa ingenabungozi, futhi akukho ukukhuluma okubandakanyeka kumthengisi.
Ngokuya ngebhizinisi lakho, okunye ukulahleka kuzodalwa ukukhwabanisa nokweba ubunikazi ( UChargeback Gurus ubeke leyo nombolo ngezinga elishaqisayo elingu-10-15% uma kuqhathaniswa ukukhwabanisa okunobungane). Akuvamile ukuthi izingane zisebenzise ikhadi lomzali wazo ngaphandle kolwazi lwazo, kepha kusenama-scammers amatasa laphaya, ikakhulukazi njengoba ukukhwabanisa kwamakhadi esikweletu emhlabeni kwanda. Kulezi zimo, ubungeke ubhekane nekhasimende langempela, kepha othile usebenzisa imininingwane yakhe.
Kungakanani Ukulahlekelwa Okungakanani?
Amabhizinisi asuselwa kokuthengiselana adinga ukubheka amamajini awo nezidingo zomhlinzeki wezinkokhelo. Abahlinzeki abaningi badinga ngaphansi kwe-1% ekubuyiseleni emuva nangaphansi kuka-0.5% ekubuyiselweni kwe-ACH. Ungakwazi “ukufihla” izingxenye ezithile ezinobungozi obuphakeme, ezinenzuzo kuvolumu yakho uma isilinganiso sakho sokulahleka konke siphansi, kepha kufanele ukusigcine siphansi ngokuphelele. Ngokuhamba kwesikhathi, ngisho nesilinganiso sokulahlekelwa esingu-1% siqongelela ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuvimbela Ukuqhathanisa Nokusiza
Emhlabeni onobungozi bokuthengiselana, ulwazi oluvamile ukuthi izinkampani zichitha isikhathi esingakanani ekuvimbeleni nasekuboneni ngaphambi kokuthengiselana, kuphela ukunganaki ngokuphelele ukuncishiswa kwangemva kokulahlekelwa nokusizakala.
Ukulahlekelwa kuyingxenye yanoma yiliphi ibhizinisi, ngoba ukuthuthukisa ukulahlekelwa okungu-zero kusho ukuvimbela okukhulu-ususa ibhizinisi elihle. AbakwaFraudSciences, kanye nomhlinzeki wokuqala wokuvimbela ukukhwabanisa, wakwazi ukusiza abathengisi ukuthi baphinde baphindeke kabili ngebhizinisi ngokufaka umshwalense ngokukhokhelwa emuva. Kufanele ucabangele ukuthi unqaba kangakanani ibhizinisi ngenxa yenqubo evimbela kakhulu, nokuthi yini enye ongayenza uma unamanani wokulahlekelwa aphansi.
Uma uhlinzeka insizakalo futhi uyivalela amakhasimende angakhokhi, kungenzeka uhlangabezana namazinga wokulahlekelwa aphansi kakhulu. Kufanele ucabangele ukuthi mangaki kulawo makhasimende ongawawina ngokuzama ukuxazulula ibhalansi esele nokuwalalela. Isevisi enhle yangemva kokulahlekelwa igxila kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende ngokuxazulula izingqinamba zesevisi njengoba ithola imali oyikweleta.
Kuyafana nokulahleka kokukhwabanisa. Ngenkathi amanye ala macala okukhwabanisa engokoqobo, amaningi angumphumela wokungaqondi noma ukungavumelani kwensizakalo. Ngokwakha ukugeleza kokusevisa okugxile ekuqondeni inhloso yekhasimende, uzokwazi ukuthuthukisa ukugcinwa, ufundise iqembu lakho ukuthi livimbela kanjani ukulahleka kangcono, futhi likhokhelwe.
Izinsuku Zokuzenzakalelayo Zokuqala
Sincoma ukuthi usebenze ngokulahlekelwa ngaphakathi emavikini ambalwa okuqala. Ukusebenza ekulahlekelweni ngokwakho kunezinzuzo ezimbili:
Njengoba usebenzisa umkhiqizo wakho ukuxhumana nekhasimende, kungenzeka ukuthi ubuyisane namakhasimende adidekile futhi uwagcine.
Ukubhekana namakhasimende athukuthele kungaba isifundo esiyigugu ngebhizinisi lakho, futhi awufuni ukuthembela kwabanye ukuthi bazokunikeza leyo mpendulo kusenesikhathi.
Kunezinto ezimbili okufanele uzenze ngemuva kokuzenzakalelayo:
Qala i- inqubo yokutakula ezenzakalelayo. Uma inkokhelo yekhadi yehlulekile, zama ukuyikhokhisa futhi ngemuva kwezinsuku ezimbalwa. Uma inkokhelo ye-ACH yehlulekile, cabanga ukuzama futhi (ukwakheka kwemali ye-ACH kwehlukile futhi ukuzama kabusha kuyinkimbinkimbi). Uma unezinsimbi zokukhokha ezingaphezu kwesisodwa ezifakwe ku-akhawunti, uzama ukuyikhokhisa leyo. Lokhu kufanele kuhambisane nemizamo elula yokufinyelela.
Qala ukumelwa nomhlinzeki wakho wokukhokha. Ngokuhamba kwesikhathi uzofunda ukuthi hlobo luni lobufakazi obudingekayo ukumelwa futhi ube ngcono ekuqedeni ukubuyiselwa emuva. Ungakhuphukela ku-20-30% emuva usebenzisa le ndlela.
Lapho Imizamo Yokuqoqa Kwasekuqaleni Ihluleka
Amabhizinisi amaningi anqena ukusebenzisa ama-ejensi okuqoqa izikweletu ukuthola imali elahlekile. Imboni ithole idumela layo elibi ngokuqhubeka nokusebenzisa amaqhinga anolaka ne-UX embi. Yilapho ukukhetha umlingani ofanele kubalulekile; ukusebenza nenkampani yezobuchwepheshe egxile kulwazi lomsebenzisi lokuqoqwa kwezikweletu empeleni kungasiza umkhiqizo wakho.
Umsebenzi wokuqoqa umsebenzi ungasekela umkhiqizo wakho ngokunikeza amakhasimende indlela yokukhipha ukukhathazeka kwawo ngaphambi kokwenza inkokhelo. Kumakhasimende anqaba ukukhuluma nawe, ukunikela ngenqubo yokuphikisana eqinile ngenkathi ecela inkokhelo kuyindlela esebenzayo yokuqonda ukuthi kungani behlehlise inkokhelo yabo kwasekuqaleni.
Lokhu futhi kuyiqiniso ngezisulu zenkohliso: ukunikeza amakhasimende indlela elula yokuziveza kumuntu wesithathu kuvame ukusiza ukuhlukanisa izisulu zangempela zenkohliso kubathengi abazisolayo futhi kunikeza izisulu zenkohliso umuzwa wokuvikelwa nokuqonda.
Ukulahlekelwa kokuthengiselana kuyingxenye yokwenza ibhizinisi futhi kudinga ukunakwa. Ukusebenzisa inqubo elula yangaphakathi nomlingani oqinile wokukhipha umsebenzi kungakusiza ukuthi ukhokhelwe, uqonde ikhasimende lakho kangcono, futhi uthuthukise nokugcinwa.
Tags: ukukhwabanisa kwe-ecommerceukukhwabanisa okunobunganeamaqoqo ezikweletu angaphandleukulahlekelwa kokuthengiselana
Izibalo Zohlelo Lokusebenza Kwamaselula